आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आश्विन २५ गते विहिबार – कामना डेली
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आश्विन २५ गते विहिबार
प्रकाशित मिति २०७५ आश्विन २४, बुधबार २२:२३
वि.सं. २०७५ आश्विन २५ गते विहिबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अक्टोबर 11 तारिख, सूर्योदय : बिहान ०६:०१ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:३९ बजे,
मेषः– आकस्मिक अनायास खर्च वृद्धिले कार्य क्षेत्रमा समस्या ल्याउनेछ । व्यवहारिक रुपमा सहयोग गर्ने कोहि भेटिने छैन । अरुको काम गरेर जश पनि मिल्ने छैन । पारिवारिक समस्या बढ्नेछन् । काम काजमा बाधा अवरोध आउने देखिन्छ । व्यापार घट्न सक्छ । आफन्तबाट विश्वासघात हुन सक्छ । मनमा अशान्ति हुन सक्छ ।
वृषः– आफ्नो काममा आफै लाग्दा बढि मुनाफा हुनेछ । कार्य क्षमता,कार्य दक्षता र कार्य विज्ञता बढ्नेछ । पराईको बोलीको विश्वास नगर्नु होला कुनै पनि बेला धोका दिन सक्छन् । रोकिएका अधिकाँश काम सम्पन्न हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । पारिवारिक समर्थन मिल्नेछ । सामाजिक काममा कम सफलता मिल्नेछ ।
मिथुनः– बोली नियन्त्रण गर्नु उचित हुनेछ नत्र आफैलाई घाटा हुनेछ । बाह्य कुराको प्रभावमा नपरि आफ्नै ज्ञान शिप र बुद्धिको प्रयोग गरेर काम गर्नु होला । समयको महत्व बुझ्न सकिएन भने धेरै अवसर गुमाउनु पर्नेछ, ध्यान दिनुहोला । नियन्त्रण गरेर आर्थिक कारोवार गर्नु पर्र्ने देखिन्छ । आन्तरिक कुरा कसैलाई नखोल्नुहोला । प्रयत्न सफल हुनेछ ।
कर्कटः–सामान्यतया दिन अनुकुल जस्तै देखिन्छ तर महिलाका कारण अप्ठ्रोमा पर्न सकिन्छ चनाखो रहनुहोला । आफ्नै प्रयासमा आर्थिक उन्नति हुनेछ । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । भोज भतेर सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर मिल्न सक्छ । काम गर्ने जोश,जागर घट्ने छैन । व्यापार व्यवसायमा देखिएका समस्या कम भएर जाने छन् ।
सिंहः– लगानी गलत ठाँउमा पर्न सक्छ सोच विचार अगाडि बढ्नु होला । परभाव,परबन्धनको सम्भावना देखन्छि । अकारण दोष पाईनेछ । मिठा र चिल्ला कुराको पछि नदौडिनु होला दुःख पाईनेछ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउने छ । राम्रो कुरा गर्दा नराम्रो हुन सक्छ । स्पष्ट बोल्दा आफैलाई घाटा हुनेछ । बढि महत्वकाँक्षी नबन्नु होला ।
कन्याः– मान्यजनको आशिर्वाद लिएर काम गर्नु होला । आफुमा भएको ज्ञान र शिपको उपयोग गर्न सके धन आर्जन राम्रो हुनेछ । आकस्मिक धन हात पर्ने योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । धन संचिती बढ्नेछ । राजनैतिक चासो बढ्नेछ । नोकरीबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ भने सामाजिक कामबाट प्रतिष्ठा बढ्नेछ ।
तुलाः– राजनैतिक व्यक्तिको विश्वास परेर काम नगर्नु होला । आफ्नो काम गर्न आफै सक्षम हुनुहुनेछ । पढाईमा प्रगति हुनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुनुहुनेछ । अपुरा अधुरा काम अगाडि बढ्ने छन् र थोरै मेहनत गर्नु भएको खण्डमा सम्पन्न पनि हुनेछन् । तपाईलाई सहयोग गर्ने भन्दा सहयोग माग्ने बढि हुनेछन् ।
वृश्चिकः– समयमा विस्तारै सुधार आउनेछ । भाग्यले थोरै साथ दिदा केहि सहजता महशुस हुनेछ । आफ्नो काम छोडेर अरुको कामतिर नलाग्नु होला । शैक्षिक गतिविधि थोरै अगाडि बढ्ने छन् । पारिवारिक खर्च नियन्त्रण गरेर काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा विस्तारै प्रगति हुनेछ । यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
धनुः– संवेदनशिल भएर काम गर्नु होला काबु बाहिरको स्थिति सृजना हुनसक्छ । तनाव बढ्नेछ । आहार विहारमा ध्यान दिनु होला स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । आर्थिक संरचनालाई नचलाउनु होला गडबढ हुनसक्छ । अरुको कुरा सुनेर काम गर्नु भयो भने डुब्नु हुनेछ । लगानी अनुसारको प्रतिफल कतैबाट मिल्ने छैन । विश्वास पात्रले धोका दिनेछ ।
मकरः– सामान्यतया दिनु अनुकुल नै देखिन्छ । नगदमा काम गर्नु होला,उधारोमा गर्दा पछि उठाउ सकिने छैन । नयाँ कार्य योजनाहरु अगाडि बढ्ने छन् । लगनशिलताले नै सफलताको शिखर चढाउने छ । देश,देशान्तरका उद्योग धन्दा बन्द व्यापारबाट आम्दानी बढ्नेछ । जीवन साथिको सहयोमा केहि काम हुनेछन् । यात्राको योग पनि देखिन्छ ।
कुम्भः– चनाखो भएर अगाडि बढ्नु होला काममा शत्रुको बक्रदृष्टि पर्नेछ । सवैलाई आफ्नो ठानेर काम गर्ने अवस्था रहने छैन । संघर्ष विना कहि कतै सफलता मिल्ने छैन । मेहनतको अन्तिम परिणाम भने सुखद रहनेछ । मुद्धा मामिला बादविवादमा जीत हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा सुधार आउनेछ । प्रतिष्ठाको लडाई जितिनेछ ।
मिनः– अध्ययन गरेर मात्र काममा हात हाल्नु होला । काममा सक्रिता पनि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । काम गर्दा दुविधामा नपर्नु होला अवसरबाट चिप्लिनु हुनेछ । बाह्य कुरामा लाग्नु भयो भने पछि परिनेछ । शैक्षिक र न्याय मार्ग कमजोर देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । सहयोग हात कमै भेटिने छन् ।
बुद्ध भारतमा जन्मिएको प्रचार अभियानमा सांसद साह